Maraykanka oo ka hadlaya khilaafka kenya iyo Somaaliya – Radio Daljir
Maarso 10, 2019 3:44 b 1
Waregyska the East Afrika ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa qoray in maamulka Madaxweyne Trump uu dhawaan soo faragalin doona Muranka badda ee ka dhex taagan Soomaaliya iyo Kenya.
Dowladda Mareykanka ayaa qorsheysay in ay saameyn ku yeelato xiisadda labadda dal ka hor in Maxkamadda Caalamiga ee ICJ aysan shaacin cidda sidda rasmiga ah ugu guuleysatay Muranka Badda Soomaaliya iyo Kenya.
Sidda uu qoray Wargeyska dowladda Mareykanka ayaa ka walaacsan xaaladda ay ku sugan tahay Soomaaliya iyo taageeradda ay siiso Soomaaliya, siddaasdarteed Soomaaliya ayaa macquul ah in ay ku qanacdo in la yeesho wadahadal dowladda Mareykanka ay hormuud ka tahay.
Dowladda oo xakamaynaysa Gadiidka Xamuulka ah ee Muqdisho
Yoji 2 years ago
Dhex dhexadinta maraykanka way iska cadaha waxa kaso bixidona sadarted. Dowlado kale oon xulafada nato kujirin halo dhiibo arinka.